Isakhiwo esifanelekileyo kunye namaqabunga amahle enqabileyo enamaqabunga esi sityalo asuke ekhangelekile kumntu wokuqala. Kodwa ukuba ubuncinane intyatyambo isasazeka, isasaza iphunga elimnandi, akunakwenzeka ukulibala. I-Tabernemontana sanango (Tabrnaemontana sananho) ukusuka kwintsapho yaseKutrovye - enye yezindlu eziphambili kunye nezifunayo. Lo mthi onesiqhelo uvela emahlathini aseHudiya asemahlathini aze afinyelele ukuphakama kwe-2 m kwimvelo, ekwigumbi -1-1.5 m. Iintlobo ezinqabileyo zentlanzi ziyaziwa yiziqhamo ezidliwayo, iintyatyambo eziqholiweyo kunye namaqabunga amakhulu kwiintsapho zawo. Ngoko ke, abaninzi abathandi beentyatyambo banomdla kwiindawo zokuthenga imbewu yeTabernemontanang Sanango.
Ubumnandi bentabontontana - ubude
Iintlobo ze-apical inflorescences zeentyantyambo ezimhlophe zekhephu zivela ezinokuphazamiseka okuncinci ngonyaka, kodwa iintyatyambo ezisebenzayo kunye neziqhumayo zivela entwasahlobo nasehlobo. Iifama zeentyatyambo zifakwe phezulu kwiphitshi, ngelixa ukukhula okubini kwe-lateral kuvuswa ngexesha elinye. Ngethuba leentyantyambo, iibini zeeqabunga ezincinci zikhula zivela kubo, zingaphazanyiswa ziintyatyambo. Kodwa emva kokuba imilambo iqala ukukhula okusebenzayo kwamahlumela. Kwaye emva kwe-internodes ezimbini okanye ezine, iifuno zeentyatyambo ziphinde zibekwe kwaye zifakwe.
Kwi-inflorescence yemnquba ye-tabernemontan inokuvela kwi-3 ukuya kwe-15, ukuvula kancane kancane. Iintyatyambo ziphakathi (3-5 cm), i-semi-double, enezintlu ezinqabileyo, ezinamapalini anonxweme. Iphunga leTabernemontanas iSanango liluhlaza kwaye lincinci, liqine kakhulu kwiintyatyambo ezivulekileyo. Ngokuhamba kwexesha, iindawo ezingezantsi zamasebe azibonakali, kwaye ulwahlulo olubukhali lwamasebe luba lubalaseleyo. Nangona kunjalo, ukuba amaqabunga amaninzi aphendulela okwesibhakabhaka (kusekho amaqabunga ayisithandathu okanye anesibhozo ashiywe kwiindawo eziphakamileyo zezihlumela), kuthetha ukuba isityalo sele sitshintshiwe kwaye asinako amanzi aneleyo.
Udinga ukukhanya okugqamile, kodwa ukukhanya
Ukukhunjulwa kwangaphandle kwegadi ye-gardenia, i-tabernemontan sanango ayikhathazi imikhosi yakhe ngeengxaki ezingenasidingo kunye neengxaki ezingapheliyo. Kodwa xa iThabernemontane idlulayo iminyaka eyi-10, udinga indawo enkulu kwaye ifanelekile indawo yayo yobuhle. Ubungakanani besithsaba, ukuba ayinqunyulwa, kule minyaka ingaba ngaphezu kweemitha. Ukucwenga ubuhle obunjalo kwifenitshala eyenziwe yifenitshala yinto engenamsebenzi, ngoko ke kuyimfuneko ukuba usebenzise ukutyala.
Indawo engcono kakhulu yokukhula i-tabernemontany sanango yintshona yeefestile okanye entshona. Oko kukuthi, kukhanya kakhulu, kodwa ukukhanya okugqithisileyo kuyadingeka. Kwi-penumbra, izinga lokukhula liyehla, i-buds ikhula kancane. Kodwa isiphumo esibi esibonakalayo kwisityalo sinomlinganiselo ophantsi wokukhanya. Ekubeni i-tabernemontana sanango ayinandaba ngokupheleleyo nobude bomhla wokukhanya.
12 degrees ayiyiyo!
Esi sityalo sikhula kakuhle kwiqondo lokushisa kwe-+18 - +25 degrees. Nangona kunjalo, inokunyamezela ukushisa okuphantsi, ukuya kuma-12 degrees okanye ngaphantsi. Kwiqondo lokushisa elisezantsi, ixesha lokuphila leentyatyambo liyakhula, apho kwiimeko ezifudumeleyo ziwela ngosuku lwesithathu okanye lwesine ngaphandle kweempawu zokuhlutha.
Ubuninzi kunye nobunzulu bokunkcenkceshela kwesityalo esinamanzi buxhomekeke kakhulu kwinqanaba lokuphuhliswa kwengcambu. Ukuba isityalo esandul 'ufumene ibhokhwe ebanzi, kufuneka isiliswe emva kweentsuku ezintathu ukuya kwezine, ngokwemodare, njengoko ugcino oluphezulu lumile. Ngobuninzi beengcambu eziye zaziqonda ngokupheleleyo umhlaba, i-tabernemontan sanango idinga ukutyilisa rhoqo ukuba umntu unokuqikelela isidingo sokutshintshwa. Ubume bokunkcenkceshela kuthinteka kwezinye izizathu: ubushushu, umswakama. Ngeempawu zokukhula kunye nokubonakala kwemifuno, imithi ixhaswa ngamachumisi afanelekileyo - ukwenzela ukukhula okanye ukugquma.
Kumele kukhunjulwe ukuba i-tabernemontanas ye-sanango ikhula ngokukhawuleza kwaye ifuna ukutshintshwa ngokukhawuleza kamva. Iipateni ezilungileyo zizo ezo zilungele ukukhupha umhlaba. Iibhotile zombhobho, iimbiza eziphakathi kwengubo ezifakwe ngaphakathi okanye ukupakisha phakathi akuvumelekanga. Iingcambu ze-tabernemontanas ze-sanango zincinci. Ngaphandle kokunyanzeliswa, abanako ukulimala, kodwa balahlekelwa kakhulu. Awukwazi ukutsala ngamandla kwi-trunk, ukudonsa isityalo kwibhodi elidala, ukutshintshela isityalo esikhulu esinomanzi kakhulu, ngoko ke isitya esinzima. I-substrate iqulethwe ngumyezo, i-coniferous kunye nomhlaba ohlaza, i-peat, isanti, i-vermiculite. Umxube wempendulo uncinci okanye u-acidic. Kubalulekile ukutshala izityalo ezincinci ngonyaka, kodwa phakathi kwezinto ezihambayo enye okanye amaxesha amabini kunokuba kuyimfuneko ukudlulisela ngaphezulu ebhodweni. Iimodeli ezindala ziyakutshintshwa rhoqo kwiminyaka emibini.
I-Tabernemontana sanango iifom ngokwakhe
Emva kweentyantyambo kwiqumrhu ngalinye, iifom ezimbini ziyavuka, kwaye ukukhanya okufanayo kufaneka ngokucacileyo nangokuchanekileyo. Ukuprintwa kuyadingeka kuphela kulawo maqhinga ayekhulile, kwaye kwinqanaba lokunqunqa lalingenakunqandwa kwaye lucatshulwa. Izityalo eziqinileyo zinqunyulwe iinqununu zokuvelisa iimbala, yonke imimétri iphukile okanye kuyimfuneko ukunqumla zonke iiphakamileyo. Iimpawu ezidala kuphela ziyakwazi ukufumana iindidi "ezongezelelweyo", zijoliswe ngaphakathi kwisithsaba, zisuse.
Unako ukusasaza i-tabernemontanu sanango kunye nembewu kunye nokusika. Izicucu kufuneka zinqunywe kwisityalo esinempilo kwaye ngokukhethekileyo zivela kwinqanaba le-apical (ezona zininzi izandla aziphakamisi izandla). Emva koko, phatha unqumle kunye neengcambu uze ubeke umxube emanzini, ungeze amabini okanye amaconsi amathathu e-phytosporin. Beka i-vase nge-cuttings esikhwameni seplastiki uze ufake, umzekelo, kwi-shelf ekhitshini okanye kwikhabhinethi kwindawo eqaqambileyo, kodwa ingabi yelanga kunye nobushushu obuphezulu ngaphezu kwama-20 degrees. Xa iingcambu zifikelela ngobukhulu be-2.5-3 cm, faka ebhodweni enobubanzi obuyi-8-10 cm kunye nomhlaba ovulekileyo. Unokuyithatha ingcambu kwi-vermiculite, isanti, kwindawo yokubamba phantsi kwesibane. Kwaye maxa wambi iingcambu zenziwe ngokusemgangathweni kumasebe ezimbali, zifakwe ngendlela ye-bouquet ngamanzi aqhelekileyo.
Kwi- tabernemontan sanango ebunobunzima ayidla ngokugula
Isifo esiqhelekileyo sisifo se-chlorosis. Inokuthi igwenywe ngokukhupha i-substrate, ukuzisa amalungiselelo ensimbi, ukulandelela izinto. Kwiintlanzi yizona zinambuzane ezixhaphakileyo kunye nesalwe. Ngamanye amaxesha ngaphantsi kwamacembe avela amhlophe amhlophe, ke ukuma kunye neebhola ze-yellowing. Oku kukuphela kweengqungquthela zamagqabantshintshi, kwaye abanalo ulwalamano nezilwanyana. Kwamagumbi anokushisa okuphezulu kunye nomoya ophantsi omswakama, ungagcina "u-gluing" kunye nokuwa okulandelayo kwaye kungabikho ukuhluma.
Naphezu kwegama elincinane elingalibalekiyo, i-tabernemontana sanango ngenye yezona zinto zithandwa kakhulu. Ukuthenga imbewu yeThabernemontanang Sanango okanye ukusika kwayo, uya kugcwalisa indlu yakho ngefumba elimangalisayo. Kwaye amaqabunga ayo aluhlaza-mveliso yinto yokuhlobisa indlu naliphi na ixesha lonyaka.
Kutheni izityalo zingaqandi phantsi kwekhephu?
Ilayisi ngeengulube, i-omelet kunye nemifuno
Iinkcukacha ezintsha malunga nokufa kwendodana ka-Miyagi yombali
Ikhefu "I-Zebra" kunye ne-kottage cheese kunye ne-chocolate cream
Ababhalisi bakaYulia Baranovskaya baxela ukungqubana phakathi kweBuvvaya neVasilyeva